Ndị ọchụnta ego Dutch na-eme atụmatụ ịtọlite ​​mmepụta French fries na Kazakhstan - magazin "Potato System"
Ndị ọchụnta ego Dutch na-eme atụmatụ ịmepụta fries French na Kazakhstan
Onye nnọchi anya gọọmentị na ikike nke alaeze nke Netherlands na Kazakhstan, Kyrgyzstan na Tajikistan Andre Kartens bịarutere na Zhambyl oblast iji kpaa maka ọrụ ndị nkịtị, Kazinform onye nta akụkọ na-akọ.
Dabere na ọrụ pịa nke akim nke mpaghara Zhambyl, ụlọ ọrụ Dutch "Farm Frites Beheer" yana LLP "K-Agro Holding" mpaghara ahụ na-ezube iwu osisi maka mmepụta nke fries French na mpaghara Shu. Ihe oru ngo a bu ihe ruru $ 145. Ọ bụrụ na e mejuputa ya, a ga-emepụta ọrụ ọhụrụ 240. A na-eme atụmatụ inye osisi ahụ na 2023. Onye isi mpaghara ahụ, Berdibek Saparbayev, mgbe ya na onye nnọchi anya Extraordinary na Plenipotentiary nke Alaeze Netherlands nwere nnọkọ, mesiri ya obi ike na a ga-enye ndị na-etinye ego nkwado zuru oke. N'oge ahụ, egosilarịrị ọnọdụ nke ihe ga-eme n'ọdịnihu, egosila akụrụngwa dị mkpa. “Ọrụ bụ isi bụ ịmalite ngwa ngwa ngwa ngwa. Oge na-agba ọsọ. Anyị chọrọ ụlọ ọrụ, a ga-ebupụ ngwaahịa ya, "Berdibek Saparbayev kwuru. “Igbu oge n'ihe owuwu abaghịrị anyị uru. Abịara m ịchọpụta ajụjụ ndị dị. Site n'okwu gị, aghọtara m na anyị nwere otu ebumnuche, "ka Andre Cartens zara. Dabere na Zhenis Oserbai, onye ndụmọdụ nke onye isi oche nke ndị isi oche nke K-Agro Holding, tupu ịmalite iwu ụlọ ọrụ ahụ, ndị na-achụ ego chọrọ ịmị poteto na hekta 65 wee lelee ogo arụpụtaghị ihe. Nzukọ ahụ bụ onye na-esote Mịnịsta na-ahụ maka Ọrụ Ugbo Nurbek Daiyrbekov, bụ onye kwupụtara atụmanya nke ọrụ a ma mesie ya ike na ọ ga-ekwe omume iji ndị Dutch rụọ ọrụ ndị ọzọ.
Tags: Ugbo FritesKazakhstanFrench fires emepụtara
Kemgbe mmalite nke 2020, Bashkortostan enyela ihe karịrị 1,4 puku tọn nduku na mba Central Asia
Achịkọtara nsonaazụ nhicha na mpaghara Omsk
Companylọ ọrụ America Valmont Industries ga-emepe osisi maka usoro ịgba mmiri dị elu na Kazakhstan
Ndị ọkachamara Belgium ga-enyere Kazakhstan iwebata teknụzụ ọgbara ọhụrụ na uto nduku
Azerbaijan abawanyela mmepụta na mbupụ poteto